किन नेपालबाट भारत हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी ? - Purbeli News
किन नेपालबाट भारत हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २६, २०७४ समय: १२:०८:०७
माेरङ / नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो छ । त्यसैले भारतीय पेट्रोलियम ब्यवसायी हरुले दिनहु करोडौ रुपैयाको पेट्रोलियम पदार्थको नेपालबाट तस्कारी गरी रहेका छन । नेपालमा भन्दा भारतमा २४ रुपैया डिजेलमा र १८ रुपैया पेट्रोलमा महगो पर्छ । त्यसैले भारतीय पेट्रोलीयम ब्यवसायी नेपाल आएर १० लिटरे ग्यालेनमा पेट्रोलीयम पदार्थ भरेर भारत लैजाने गरेका छन । नेपालमा प्रतिलिटर डिजेल ७७ रुपैया ५० पैसा , पेट्रोल १ सय रुपैया ५० पैसामा बिक्री हुदै आएको छ । तर भारतमा एक सय रुपैया १२ पैसा डिजेल र १ सय १९ रुपैया पेट्रोलको पर्छ ।
नेपाल भारत सीमावर्ती बजारका पेट्रोल पम्पबाट दिनहु खाली गाडी र खाली ग्यालेन लिएर आउने भरेर भात तर्फजाने क्रम बढेको छ । केही भारतीय मुलका व्यवसायीहरुको त पेसो नै यहि बनेको छ । यस्तै एक हप्ता अघि भारतको फारबिस गञ्जका गुन्जन मण्डलले विराटनगरको पुर्वाञ्चल पेट्रोल पम्पबाट डिजेल र पेट्रोल गरेर ७० लिटर भारत लगे । उनले १० लिटरका ग्यालेनमा पेट्रोलियम पदार्थ भरेर भारत तर्फ लगे ।
उनी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन उनि जस्ता सयौको संख्यामा भारतका पेट्रोलीयम ब्यवसायीहरुले एजेन्ट प्रयोग गरेर नेपालबाट सस्तोमा पेट्रोलीयम पदार्थ भारतमा थुर्पा छन र बिक्री वितरण गर्छन । नेपाल आयलनिगम पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलयले एक दुई ग्यालेन पेट्रोलीयम पदार्थ बाहिर लानुलाई तस्कारी भन्न नसकीने बताए । उनलेभने,‘ हामीले पाँच किलो चिनी जोगवनीबाट ल्यएजस्तै हो त्यसलाई तस्कारी भन्न मिल्दैन ,। आयलनगम पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलय विराटनगरले दैनिक एक लाख ८० हजार लिटर पेट्रोल र ७ लाख लिटर डिजेल भारतको जोगवनी आयत गर्दै आएको छ ।
ईन्धन तस्करीलाई बैदेशीक व्यपारीक अर्थनीति भन्न नसकीने कायालय प्रमुख खनालले बताए । निगमको भण्डारमा पाँचसय ६० केएल पेट्रोल र ५ हजार ५ सय केएल डिजेल रहेको निगमले जनाएको छ । यता प्रशानले तस्कारी गर्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने निगमका प्रमुख खनालले दावी गरे उनलेभने,‘ तस्करी भएको छैन तस्करी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही गर्छ,।